Semalt: WordPress Site Types - Ny manan-danja indrindra sy malaza
Na dia manolotra karazana safidy sy safidy aza i WordPress, dia mbola maro ny zavatra tsy hita popoka. Ny fomba tsara indrindra sy haingana indrindra hamenoana ireo tapatapa-pamantarana rehetra dia ny fananana ny tena karazana plugins. Ny Plugins WordPress dia manolotra karazana safidy sy fanamafisana ho an'ny webmasters sy bilaogera. Amin'ny safidy maherin'ny 42.000 ao amin'ny WordPress Plugin Directory, dia tsy ho mora aminao ny manao safidy tsara. Noho izany, manana tranokala WordPress plugins malalaka sy premium izahay. Izy ireo dia tena hanampy anao haka ny tranonkala amin'ny tsara ho amin'ny tsara indrindra.
Milaza i Oliver King, mpitantana ny Success Success of Semalt , fa na dia tsy mpandrindra aza ianao, dia afaka mamorona ny tranonkalanao mampiasa ireo Plugins WordPress
Ity karama WordPress plugin ity dia farafahakeliny $ 80 isan-taona farafahakeliny ary nanampy tamin'ny famerenana maherin'ny roa tontolon'ny aterineto. Noho ny fahafahany manamboatra backups sy mandefa ny rakitra ho an'ny fitaovana malaza amin'ny alàlan'ny rahona, ity plugin ity dia tsy hamela ny rakitrao very rehefa tsy mandeha tsara ny tranonkalanao. Izany dia ahafahanao misafidy avy amin'ny safidy safidy safidy, izay midika fa azonao lazaina azy hoe aiza no tianao hovonjena ireo rakitra ao anaty daty. Avy amin'ny lahatsoratra sy ny pejy amin'ny fanehoan-kevitra sy ny fanovanao, azonao atao ny mamonjy ny zava-drehetra. Raha toa ny orinasan-tranonkala fampiantranoana dia miezaka mamaha ny rakitrao, tsy afaka miantehitra aminy ianao noho ny safidiny voafetra. Raha tsy te hiaraka amin'ny Plugin Buddy plugin ianao, dia mety hanandrana VaultPress na Duplicator.
2. Word Security
Ny ampahany tsara indrindra dia ity plugin ity dia azo alaina amin'ny dikan-teny maimaim-poana sy avo lenta. Wordfence Security dia fitaovana iray manerantany izay miaro ny tranokalanao WordPress amin'ny viriosy sy malware..Manampy amin'ny fanakanana ireo mpanafika mahery vaika koa izy io ary manana rindrankajim-pirahalahiana mifototra amin'ny sehatra maro. Ho an'ny vohikala madinidinika, tsara ny vohikala Wordfence Security maimaim-poana, fa ho an'ny tranokala lehibe, ny fandoavam-bola voaisa dia tsara indrindra. Azonao atao ny manakana ny fidirana an-tsokosoko ho an'ny tranonao amin'ny alàlan'ity plugin ity, ary ny safidy sasantsasany dia iThemes Security sy Login LockDown.
Io no iray amin'ireo sehatra WordPress sy tsara indrindra fanta-daza indrindra hatramin'izao. Amin'ny ankapobeny, ity plugin ity dia hamorona Contact forms ho anao. Amin'ny sehatra sarotra, ity plugin ity dia hanafina sy hanamboatra saha ho an'ny tranokalanao, arakaraky ny fihetsiky ny mpitsidika anao. Azonao ekena ihany koa ny fandoavam-bola amin'ny aterineto, hampirisika ny mpampiasa hisoratra anarana amin'ny lisitry ny MailChimp ary manao asa hafa mitovy amin'izany amin'ny plugin. Ny fandoavam-bola karama dia mitentina $ 39 ary misy fiofanana fanampiny. Ny sasany amin'ireo safidy hafa dia ny Fandraisana Contact 7 sy ny Fast Contact Form.
4. Share Buttons avy amin'ny AddToAny
Nandritra ny volana maromaro, ny tranonkalan'ny tambajotra sosialy dia lasa ampahany amin'ny fiainantsika. Amin'ny Share Buttons, azonao atao ny mampifanaraka ny ordinatera sosialy amin'ny tranonkalanao WordPress. Tena mahavariana sy mahasoa ny tolotra sy ny safidy nataony. Misy serivisy mihoatra ny zato hitondrana ny mpitsidika anao ary hahazo fitsidihana marobe amin'ny votoatinao. Afaka misafidy mora foana ny safidy amin'ny media sosialy tianao hampisehoana ny tranokalanao. Ny sasany amin'ireo safidy tsara indrindra dia Shareaholic sy Share Buttons amin'ny AddThis.
Raha ny SEO dia tsy misy safidy tsara kokoa noho i Yoast. Io no WordPress plugin tsara sy malaza indrindra. Manana fikolokoloana toy ny tranonkala fanatsarana pejy, sokajy, ary safidy ivelany. Azonao atao koa ny manampy navigativa ahitanao horonan-tsarimihetsika, sitemap ahafahana mamorona sary, fananganana media sosialy sy zavatra hafa ao amin'ny tranonkalanao WordPress amin'ny alalan'ity plugin SEO ity. Ny sasany amin'ireo safidy hafa dia ny iray ao amin'ny SEO Pack sy SEO Ultimate Source .